Didim-pitsarana mitentina 44 tapitrisa dolara: Hita ho nanao tsirambina i Hilton tamin'ny raharaha fametavetana vahiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Didim-pitsarana mitentina 44 tapitrisa dolara: Hita ho nanao tsirambina i Hilton tamin'ny raharaha fametavetana vahiny
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Hilton Americas-Houston Hotel ao afovoan-tanànan'i Houston
Ny Hilton Hotels dia nahazo didim-pitsarana momba ny tsy fitandremana mitentina 44 tapitrisa dolara noho ny fanamorana ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vahiny iray ao amin'ny hotely.
Ny mpitsara Harris County dia namerina didim-pitsarana mitentina 44 tapitrisa dolara Hilton Management LLC rehefa nahita fa nametraka vahiny tsy nahatsiaro tena sy marefo tao amin'ny efitrano tsy mety ny mpiasan'ny hotely, ka nitarika azy hanao firaisana ara-nofo.
Ny mpisolovava avy amin'ny Blizzard Law dia niara-niasa tamin'ny mpisolovava Michelle Simpson Tuegel mba hisolo tena an'i Kathleen Dawson, ilay tafavoaka velona tamin'ny fanolanana, tamin'ny fitoriana azy. Hilton Management LLC ary ilay voampanga ho mpanafika azy, Larry Clowers, izay mpiara-miasa tamin-dRtoa Dawson tamin'ny fotoana nitrangan'ny fanafihana.
Nanaiky ny mpitsara fa ny tsy firaharahan'i Hilton dia nanana anjara toerana lehibe tamin'ny tranga tamin'ny volana martsa 2017 ary nanome 44 tapitrisa dolara ho an'i Ramatoa Dawson ho an'ny fandaniana ara-pitsaboana, very ny fahafaha-manao ary ny alahelo ara-tsaina. Hitan'ny mpitsara ihany koa fa nanao herisetra tamin-dRamatoa Dawson Andriamatoa Clowers. Inoana fa io no didim-pitsarana lehibe indrindra amin'ny tsy firaharahiana amin'ny raharaha fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny hotely lehibe iray.
"Mampatahotra ny mahita ny fomba ahafahan'ny fihaonana iray manova ny fiainan'ny vehivavy mandrakizay," hoy ny mpisolovava Ed Blizzard. “Ireny mpitsara ireny dia nahatakatra ny fiantraikan'ity hetsika ity tamin-dRamatoa Dawson ary namerina ny didim-pitsarana lehibe indrindra fantatra ho an'ny niharan'ny herisetra ara-nofo tamin'ny vondrona hotely lehibe iray. Ity didim-pitsarana ity dia mandefa hafatra mazava ho an'ny hotely fa tsy maintsy mitondra ny vahiny rehetra ao aminy izy ireo, indrindra fa ireo marefo, amin'ny fanajana, fikarakarana ary fahamendrehana.
Araka ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny fitsarana, vehivavy iray nandalo tao amin'ny Hilton Americas-Houston Hotel ao afovoan-tanànan'i Houston no niantso ny 911 raha nahita lehilahy iray nivaha ny patalohany nijoro teo ambonin'ny vehivavy iray tsy nahy nitsitra tamin'ny tany. Tonga ny polisy ary nitondra seza misy kodiarana ny mpiasan’ny hotely hitaterana an-dRamatoa Dawson, izay mamo sy tsy afaka nifandray na nandeha.
Na dia nanana famantarana tao amin'ny poketrany aza Rtoa Dawson, tsy hitan'ny mpiasan'ny fiarovana fa vahiny manana efitrano voasoratra amin'ny anarany izy. Tsy vitan'ny mpiasa koa ny nanontany ny filazan'i Mr. Clower fa “miaraka amiko izy”.
Ireo mpitsara tao amin'ny fitsarana dia nijery horonan-tsarimihetsika fiarovana Hilton mampiseho an-dRamatoa Dawson nampidirin'ny mpitandro filaminana Hilton sy ny polisy tao amin'ny efitranon'Andriamatoa Clower. Taitra Rtoa Dawson noho ny herisetra ara-nofo tamin’ny maraina.
“Misy ny politikan'ny efi-trano mba hisorohana an'io zavatra io, saingy tsy nahavita na dia ny fomba fiasa fototra indrindra niainan'ny olona rehetra nipetraka tao amin'ny hotely iray aza i Hilton: ny fanamarinana ny famantarana ny vahiny voasoratra anarana,” hoy i Anna Greenberg, iray amin'ireo mpisolovavan-dRamatoa Dawson. "Ny ratsy kokoa aza, i Hilton dia nanome tsiny ilay niharam-boina ary niandany tamin'ilay voalaza fa mpanolana, na dia teo aza ny horonan-tsary sy porofo ara-batana manamafy ny fanafihana."
Tamin'ny famaranana azy, Ramatoa Tuegel dia nilaza fa “Hotely Hilton, orinasa misy manamboninahitra, politika, ary loharanon-karena, orinasa iray nandoavan'i Kathleen toerana azo antoka hametrahan'ny lohany ny lohany amin'ny alina, nanamboatra ny lalana mankany amin'ny herisetra ara-nofo nataon'i Kathleen rehefa nampidirina izy, toy ny ragdoll teo amin'ny seza misy kodiarana Hilton, fa tsy niditra tao amin'ny efitrano. efitra nosoratany sy nandoavam-bola, fa tao amin’ny efitranon’ny mpanolana iray.”